Nagarik Shukrabar - विवाहितसँग रिलेसनसिप कसरी छुटाउने होला ?
शनिबार, ३० असोज २०७८, ०५ : २०
मङ्गलबार, २१ माघ २०७६, ०१ : २९ | शुक्रवार
सिड्नी आएको ९/१० महिना भयो। यो बिरानो ठाउँमा आफ्नो भन्ने कोही थिएन । दाइको चिनेको विवाहित साथी मात्र हुनुहुन्थ्यो। तीन छोराका साथ उहाँ आएको त्यस्तै ११/१२ वर्ष भइसकेको छ। उहाँले जाने–बुझेको सल्लाह सुझाव दिनुहुन्थ्यो।
एकदम मिलनसार, परिपक्व अनि मनको सफा ! दुई चार पटकको फोन वार्तालापपछि हामी अलि बढी नै नजिक भयौँ। अब हाम्रो भेट फोनमा मात्र सीमित भएन। कफी सपदेखि पार्कसम्म हप्तामा १/२ पटक हुन थाल्यो।
हुन त, नेपालमा हुँदा कानुनको विद्यार्थी थिएँ। काम पनि राम्रै पाइरहेकी थिएँ। हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएका कारण दुई वर्षभन्दा बढी सम्बन्ध टिकाउन सकिएन। त्यसैले पनि मलाई कतिबेला देश छोडौँ भइरहेको थियो। र, हतारमा म अस्ट्रेलिया भासिएँ।
अनि सुरु भयो जिन्दगीको नारकीय र अत्यासलाग्दो जिन्दगी ! तर यसबीचमा दाइको साथीको कुराले मन छोयो। मन छोएपछि हामी एकअर्कासँग नजिकियौँ। यसपछि मन मात्र नजिकिएन, तन पनि नजिकियो। हप्तामा हामीबीच २/४ पटक सेक्स पनि हुन थाल्यो। यो हामी दुईबीचको शरीरको माग पनि थियो।
उहाँ पनि मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ, जुन मैले यसअघि कहिल्यै पाएकी थिइनँ र महसुस पनि गरेकी थिइनँ। उहाँका धेरै कुरा मलाई मन पर्छन्। उहाँलाई पनि मेरा कुरा धेरै मनपर्ने रहेछन्।
यी सबै कुरा उहाँकी पत्नीले थाहा पाउनु भयो भने उहाँलाई कस्तो महुसस होला क्या ! त्यसैले म यो मामिलाबाट कसरी निस्कने होला ?